Ibsa ABO- Ummata Oromoo Lolli Irratti Baname Yakkamaa Taasisuuf Yaaluun Akeeka Mootummaa Wayyaanee Ifa Godha | QEERROO
Ibsa ABO- Ummata Oromoo Lolli Irratti Baname Yakkamaa Taasisuuf Yaaluun Akeeka Mootummaa Wayyaanee Ifa Godha
Posted on December 19, 2017 by Qeerroo
Ummata Oromoo Lolli Irratti Baname Yakkamaa Taasisuuf Yaaluun Akeeka Mootummaa Wayyaanee Ifa Godha
Mootummaan Wayyaanee akeeka dhaabbataa, ummata Oromoo miidhuu jedhuun lola ummata Oromoo irratti adeemsisutti dabalee ummatoota waggoota dheeraaf obbolummaa, jaalalaa fi nagaan waliin jiraatan irratti kakaasuun dhumaatii gaddisiisaa fi ulfaataa dhaqqabsiisuu erga jalqabee ji’ootni lakkaa’aman. Lola hogganoota, qondaalota waraanaa fi tikaa Wayyaaneen qindeeffamee ajaja isaaniin Liyyuu Polisiin irratti geggeeffamu kanaan lammiileen Oromoo lubbuu dhaban dhibbootaan lakkaa’amu. Kan qaamaa hir’atan, qe’ee isaanii irraa baqachiifaman, qabeenyi saamamee fi barbadeeffamee bakkeetti hafanis kuma dhibbootaan lakkaa’amu. Kun hundi tahee Muummichi Ministeraa Itoophiyaa guyyaa tokkollee dhimma kana dubbatee hin beeku.
Lolli ummata Oromoo irratti mootummaa Wayyaanee fi mootummaa bulchiinsa naannoo Somaaleen geggeeffamaa jiru kun akka tasaa kan eegale osoo hin taane, yeroo dheeraaf irratti yaadamee fi qoratamee kan jalqabame dha. Ummata Oromoo jilbeenfachiisuuf karoora hidhannoo hiikkatuu qaba jedhuun hikkachiisee meesha-maleeyyii taasisuun weeraraaf saaxile. Haala aanjaa mootummaan kun uume kana irratti hundaa’uunis, kanneen hidhannoo, leenjii fi dhiheessii gahaa mootummaa irraa argatan, ajajaa fi karoora mootummaa hojii irra oolchuuf, akkasumas fedhii addaa lafa Oromoo irraa qaban guuttatuuf gara-jabina dorgomaa hin qabneen Oromootti duuluun daa’immanii fi dubartiin osoo hin hafiin jumulaan ajjeesan. Mana irratti guban. Qabeenya saaman. Beeylada isaa ooffatan.
Lolli Baha Oromiyaa irraa hanga Kibba Oromiyaa dhaqqabe, daangaa kiiloo meetira kuma tokko dheeratu irraan baname kun osoo hin jalqabiin dura, ABOn shira Wayyaaneen itti jiru hubatuun irra deddeebi’ee saaxilaa fi kanneen balaa ummata irra gahuun qumaara siyaasaa taphachuu barbaadan gochaa diinummaa kana irraa akka dhaabbatan dinniinaa ture. Addunyaa fi ummatoota Itophiyaas hubachiisaa bahe. Haa tahu malee gura dhaga’u hin arganne.
Mootummaan Wayyaanee lola kanaan ummata Oromoo dadhabsiisuu, FXG Oromiyaa keessatti finiinaa jiru ittiin dhaamsuu fi qabsoo ummatni mirga isaaf adeemsisaa jiru irraa maqsuuf yaadee kan jalqabe waan taheef dhaga’uu hin barbaadne. Ummatoota wal lolchiisuun aangoo irra of tursuun akeeka isaa waan taheef fuula durattis furmaata ni argamsiisaan hin yaadamu.
Lola kana keessaa mootummaan Wayyaanee fi kittillayyoon isaa qooda hin qaban jedhe kan yaadu yoo jiraate haala lafa irratti tahaa jiru kan hin beekne ykn haqa jiru amanuu kan hin barbaadne qofa. Haala mul’ataa kanaaf ragaa tahu hedduu dhiheessuutu danda’ama.
Lolli ummata Oromoo Baha, Kibba-Bahaa fi Kibba Oromiyaa keessa jiraatu irratti baname waggaa oliif wayta adeemsifamaa turetti mootummaan federaalaa tarkaanfii homaatuu fudhatuu lagatuu dhaan callisuu filatuu;
Hidhattootaa Somaalee ummata Oromoo irratti bobbaafaman kanneen, leenjii qaama mootummaan kennisiisuutti dabalee, meeshaa gurguddaa hidhachiisuu, geejjibaa fi dhiheessii garagaraan tinnisuu;
Wayta ummatni Oromoo weeraramee nageenya isaa akka tiksaniif humna mootummaa naannoo isaa jiru gaafatutti dhaga’uu diduu fi caalaatti akka gaaga’amuuf weerartoota tumsuun haala aanjessuu;
Wayta ummatni Oromoo kuma dhibba torba tahu buqqaafamee, qabeenyi isaa saamamee harka qullaa ari’amu dirmachuufii dhabuu fi ba’aan isaa ummata Oromoo qofa irratti kufu;
Dhumaatii suukanneessaa Calanqootti, akkasumas naannoo Daaroo Labuu Ona Hawwii Guddinaa keessatti raawwatame ilaalchisee balaaleffannaa homaatuu dhageessisuu irraa of qusatuun ejjannoo mootummaa Wayyaanee ibsa.
Kanatti dabalee yakka daangaa hin qabne irratti raawwatameef kan itti gaafatamuu qabu Liyyuu Polisii fi waraana Wayyaanee dhiisuun ummata Oromoo gaafatamaa taasisuuf ibsi muummicha Ministeraa biyyattii Hayila Maariyaam Dassaalany Muddee 17, 2017 kenne ammoo, caalaatti gaddisiisaa fi qaanfachiisaa diinummaa mootummaan kun ummata Oromoof qabu agarsiisa.
Muummichi ministeraa kun ibsa kenne keessatti dhumaatii ji’oota dheeraaf deemaa tureef Oromoo gaafatamaa taasisuuf kajeele. Lola kana eenyutu jalqabe? Eessatti deemaa jira? Maaliifis adeemsifamaa jira? gaaffiilee jedhan osoo hin ilaalatiin ibsi kenname kan isa taajjabsiisu qofa osoo hin taane, isaa fi mootummaa nan dursa jedhu kan gaafachiisu dha. Ummata Oromoo qe’ee isaa keessatti mirga weerartoota of irraa ittisuu dhorkatuun, dhumaatii sirra gahaa jiru ameen jedhii fudhadhu jechuun ala hin tahu. Akka mataa biyyaatti kan irraa eegamu silaa kan yakka raawwatee fi miidhama ummata Oromoo fi ummata Somaalee naannoo sanatti taheef gaafatamaa kan tahan humna Liyyuu Polisii fi waraana Itoophiyaaf tumsuu osoo hin taane, haqa jiru ifa gochuun tarkaanfii nageenya ummataaf wabii tahe fudhatuu ture.
Har’as taanaan ummatni Oromoo mootummaa Wayyaanee irraa haqan argadha jedhee hin eeggatu. Rakkina ana irra gaheef anaaf dirmata jedhees hin abdatu. Humni waraanaa mootummaa isaaf gaachana akka hin tahiinis hubatee jira.
Ummatni keenya lola karaa adda addaa mootummaa Wayyaaneen isa irratti qindeeffame kana of irraa ittisuun mirga isaa tahuu hubatuun of irraa ittisuu jabinaan itti fufuun alatti furmaata biroo hin qabu.
Ummatni Oromoo bal’aas obboleeyyan isaaf dirmannaa godhe ABOn dinqisiifataa, fuula duras kan Oromoof dirmatu Oromoo malee kan biraa akka hin jirre haalli amma mul’ataa jiru waan mirkanneesseef dirmannaa isaa cimsee akka itti fufu,
Lammiileen Oromoo biyyoota alaa jiraatanis dhiphuu fi rakkoo ummatni keenya keessa jiraataa jiruu fi dhumatii irra gahaa jiru bifa garagaraan addunyaa dhageessisuu irratti akka jabinaan hojjatan, dirmannaan ummata isaaniif godhaa jiranis ummata gahaa jiraatuu mirkaneeffataa akka itti fufan ABOn hubachiisa.
Ummatni Oromoo fi Ummatni Somaalee ollaalee fi obboleewwan waggaa dheeraa waliin jiraatan tahuu hubatuun, lolli Liyyuu Polisii fi mootummaan wayyaanee Oromoorratti gaggeessaa jiran obbolummaa kana booressaa waan jiruuf kana dhaabuu irratti waliin akka hojjatan waamicha keenya haaromsina.
Dhuma irrattis, Mootummaan Itoophiyaa ummata weeraramaa qe’ee isaa weerartootaa fi hidhattootaa ofii leenjisee itti bobbaase ofirraa ittisaa jiru yakkuun furmaata hin tahu. Dhumaatii Oromoo irra gahee fi qabeenya barbadaa’eef sababni “Kiraay sabsaabii” fi “kontirobaandistoota” jechuun xiqqeessuun bira dabruuf yaaluunis lola Oromoo irratti baname hin dhaabu. Yakka kanaaf gaafatama jalaas isin hin baasuu. Lola ummata Oromoo irratti baname karoorsuu fi qindeessuu keessatti kanneen qooda qaban, qondaalotni waraanaa fi tikaa Wayyaanee, akkasumas hogganootni mootummaa federaalaa fi bulchiinsi naannoo Somaalee, dhumaatii ummata Oromoo fi miidhama ummata nagaa Somaalee irra gaheef gaafatamoo tahuu ABOn gadi jabeessee hubachiisa.
Kana waliin hawaasni addunyaa tarkaanfii sanyii-duguuggii ummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kana callisee ilaaluun mootummaan Wayyaanee yakka raawwatu akka itti fufu hayyamuu tahuu hubatuun, tarkaanfii yakka raawwatamaa jiru dhaabsisuu danda’u akka fudhatu ABOn irra deebiin yaadachiisa.
Muddee 18, 2017